प्रचण्डमाथि एकाएक आक्रमण भएको खबर बाहिरिएपछि प्रहरीले मुख खोल्यो, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
प्रचण्डमाथि एकाएक आक्रमण भएको खबर बाहिरिएपछि प्रहरीले मुख खोल्यो, के हो यथार्थ ?
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि आक्रमणको प्रयास भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। प्रचण्डलाई उनकै कार्यकर्ताले सांघातिक हमला गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरीले यस बिषयमा मुख खोलेको छ।
शुक्रबार पार्टीको कर्णाली प्रदेश समितिको प्रशिक्षणमा सहभागी भएका प्रचण्डलाई उनकै कार्यकर्ताले हमला गरेको खबर बाहिर आएका बेला प्रहरी भने यसमा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले प्रचण्डमा कुनै आक्रमण नभएको दावा गरेको हो।
आज मिति २०७८साल फागुन २७ गतेको दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुर्व प्रधानमन्त्री पूष्प कमल दाहाल प्रचण्ड ने.क.पा.माओबादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा, सन्चालित राजनैतिक तथा बैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्न सुर्खेत आउनु भएकोमा हाल सामाजिक सञ्जालमा उहाँ माथी ढुङ्‍गा मुढा प्रहार भएको भनि समाचार तथा सूचना केही व्यक्ति तथा मिडियाले,अनर्गल तथा आधारहिन रुपमा सम्प्रेषण गरेको पाईएकोले यसमा कुनै पनि सत्यता नभएको ब्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।
प्रहरी कार्यालयको फेसबुक पेजमार्फत भनिएको छ। साथै यस प्रकारका झुठा भ्रमपुर्ण र शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भीर प्रकृतिका सूचनहरु सम्प्रेषण गरिएको पाईएमा बिधुतिय करोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही हुने समेत प्रहरीले चेतावनी दिएको ।
‘साथै यस प्रकारका झुठा भ्रमपुर्ण र शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भीर प्रकृतिका सूचना हरु सम्प्रेषण गरिएको पाईएमा बिधुतिय करोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ। प्रहरी कार्यालयको फेसबुक पेजमार्फत भनिएको छ।
समाचारमा जनाइए अनुसार पूर्वजनमुक्ति सेनाका युवाहरुले प्रचण्डमाथि ढुङ्गामुडा प्रहारको कोसिस गरेका भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फिजाइएको थियो भने केहि अनलाइनले समाचार लेखेका थिए।
प्रचण्डले ‘केपी प्रवृत्ति’ विरुद्ध लड्न आफूहले त्यस्तो गरेको बताउँदै गर्दा तलबाट एक युवाले ढुङ्गा हानेको तर त्यो प्रचण्डसम्म नपुगेको बताइएको थियो। प्रशिक्षणमा प्रचण्डले के भने ?
प्रचण्डले माओवादी पार्टी जनवादी युगबाट समाजवादी युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित माओवादी कर्णाली प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ‘हामी क्रान्तिको रक्षा र प्रतिक्रान्ति रोक्न सक्षम भएको कुरा स्थापित भएको छ। अब रंगिन क्रान्ति गर्न हामी तयार छौं। पार्टी कार्यकर्तालाई उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनबारे पनि जानकारी गराएका थिए।
कोरोना भाइरस र राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशका कारण केन्द्रीय कमिटीको बैठक ढिला हुन भएको हो ’ उनले भने, ‘महाधिवेशन अरुभन्दा फरक गरेका थियौं।
साथै प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै प्रतिगमन, संविधान र प्राप्त उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्ने र देशलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र रचिरहेकाहरुविरुद्ध माओवादी लडेर सफल भएको दाबी समेत गरे।
उनले केपी ओली झेली भएको टिप्पणी गर्दै ओली प्रवृत्तिविरुद्ध आफुहरुको लडाइँ रहेको पनि बताए। हामीले सबै स्वार्थ त्याग गर्न तयार भएर नै वर्तमान अवस्थामा प्राप्त सफलता हासिल भएका हुन्,’ उनले भने, ‘प्रतिक्रान्तिकारी नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह गरिएको हो।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेश कमिटीले १० वटै जिल्लाको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो। प्रचण्डले रिपोर्ट सुन्दा सबै माग र समस्याको सम्बोधन हुने बताएका थिए । साथै उनले आगामी निर्वाचनमा ढुक्क भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली भनेको माओवादीको आधार इलाका हो,’ उनले भने, ‘तपाइँहरु आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित हुने गरेर मैदानमा होमिनुस् !
साथै प्रचण्डले एमसीसीको विषयमा माओवादीले देशलाई ठुलो दुर्घटनाबाट बचाएको बताए। एमसीसीका कारण देखाई नेपालको सिंगो परिवर्तनमाथि, संविधान, संघीयता,र व्यवस्थापिकामाथि हमला गरिदै थियोे।
तर हामीले गर्दा त्यो हुन पाएन, उनले भने,‘ मुलुकको राजनीतिक कमाण्ड माओवादीले गरिरहेको छ । त्यसले राष्ट्रको अहित हुने खालका गतिविधिका विरुद्धमा माओवादी अग्रसर हुन्छ नै।